အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လားရှိုး) | TVET Myanmar
No 12 Qt. Lashio - Muse
Pyidaungsu Road .
-ကျောင်းပြီးဆုံးပါက GTHS အောင်လက်မှတ်ဖြင့် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်ဝင် ရောက်နိုင်ပြီး အထူးအောင်မြင်ပြီးဆက်လက်ပညာသင်ကြားလိုသူများအတွက် ပထမနှစ်AGTI သင်တန်းကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိပါမည်။
-GTHS တက်ရောက်ဆဲနှင့်အောင်မြင်ပြီးကျောင်းသား/သူများအတွက် TVETဆိုင်ရာ Scholarship အခွင့်အလမ်းများကို ဦးစီးဌာနမှဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ယခုလက်ရှိတွင် တရုပ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတွင်တက်ရောက်နေသူများလည်းရှိပါသည်။